I-01 / 11 / 2019 | RayHaber
Usuku: 1 November 2019
Nasi isimo sakamuva kumaphrojekthi wesitimela esisheshayo ongapheli
Nasi isimo sakamuva sokungaqedi amaphrojekthi wesitimela esiphezulu; Turkey Asonge phansi ujantshi kanye ezikude eduze, esicwaninga ezweni lonke waqala kwesikhashana edlule. Kusukela ngezikhathi ezahlukahlukene ezifundazweni eziningi [Okuningi ...]
I-Istanbul yehluleka ukungena kwi-5 yokuqala kwiZikhundla Zokusebenza Komphakathi Wezokuhamba Komphakathi
I-Istanbul yehlulekile ukufaka i-5 yokuqala kwiZikhundla Zokusebenza Komphakathi Zokuhamba Komphakathi; Ocwaningweni olunesihloko esithi "Metropolitan Public Transportation Performance League Esk, u-Eskişehir ubeka kuqala, uKonya ubeka owesibili, i-Erzurum ifika okwesithathu, i-10 ihamba kahle kwezokuhamba zomphakathi. [Okuningi ...]
Indaba yokuvala ka-Şakir Zümre, Umkhakha Wokuqala Wezikhali Zesizwe
Imboni yethu yezokuvikela yokuqala. Ungumkhiqizi wezitofu ze-coterie kanye nostalgic İş Amabhokisi wemali asebhange. Baba abangani lapho u-Atatürk esasha e-1913 eSofia. UZübeyde Hanım utshele indodana yakhe encwadini: destek Support Şakir ”. [Okuningi ...]
Isisebenzi sakwaMetro Istanbul Silethela Abakhubazekile Abagibeli Kanye Nobaba Wakhe
Abasolwa bezokuphepha bakwa-Ünalan Metro Station okusolwa ukuthi kuhamba kwabagibeli abakhubazekile, kuthintwe ubaba wakhe wangeniswa emndenini wakhe. Ubaba ehlangana nendodana yakhe, phakathi nosuku ayesebenza ngalo ngehora ngoba umkakhe wayephazamisekile [Okuningi ...]
ISumela Monastery izovakashelwa Ngokuphelele ngoMeyi 2020
UNgqongqoshe Wezamasiko Nezokuvakasha, uMehmet Nuri Ersoy: "Ngiyathemba ukuthi uma singabambeleli ekuphikisweni kwesimo sezulu, kunzima kakhulu ukusebenza emvuleni, niyazibona izimo zokusebenza, kodwa uma isikhathi sesifikile, ngithemba ukuthi ngokwenza futhi isikhathi esengeziwe 2020 18 [Okuningi ...]
Lezi Zindlela Zizovalwa NgeSonto Nge-Istanbul Marathon
IVodafone 41 izosebenza ngeSonto. E-Istanbul Marathon, imigwaqo izovulelwa abalandeli bezemidlalo ngalesi sikhathi, hhayi izimoto. I-15 Julayi Yonke imizila nayo yonke imigwaqo exhunyiwe, kufaka phakathi iSkyyrs 'Bridge, 3 Novemba [Okuningi ...]
I-3 yokugcina eKosovo 90 ezinkulungwaneni zabantu Incamela Ukuqeqeshwa Ezokuhamba
Embikweni wekota ye-2019 ye-3, abe-Kosovo Statistical Agency bathi ngenyanga edlule ye-3, cishe abagibeli be-90 abayizinkulungwane basebenzise isitimela njengendlela yokuhamba. Kosovo Statistical Agency Agency umoya, ujantshi, umgwaqo [Okuningi ...]
Martyr Birol Yildirim Caddesi Yehlisa Umthwalo Womgwaqo Omkhulu
UMasipala wase-Ordu Metropolitan, osebenzise ukutshalwa kwezimali emigwaqweni okuphefumula ukuhamba kwamadolobha ngokusebenzisa ezinye izindlela, usheshisile umsebenzi wawo ku-Şehit Birol Yıldırım Street, owakhiwa ukunciphisa umthwalo wezimoto ku-Şehit Yalçın Yamaner Boulevard. entsha [Okuningi ...]
Amafomula Wokwenza Izifundo Eziyinombolo e-Ankara Ekulondolozeni Amatshe; UMasipala we-Ankara Metropolitan ubhale amafomathi wezibalo, i-physics kanye ne-chemistry ematsheni ahlanganayo avuselelwa ku-Yüksel Street ngaphakathi kwe-"Red Crescent Renewal Project". UMasipala Omkhulu ukuze uqwashise abantu [Okuningi ...]
Ukuthinta Okumangazayo kuya Ensimini Yase-Ankara nasezindaweni ezizungezile
Ukuthinta Okumnandi ku-Ankara castle nasezindaweni ezizungezile; UMnyango Wezamasiko Ase-Ankara Metropolitan Cultural and Natural Heritage uyaqhubeka nokuhlobisa i-Ankara Castle nezindawo zayo ezinokuthinta ngobuhle ezifanele ukuthungwa komlando. Izindlu eziningi zempucuko [Okuningi ...]
Ukusetshenziswa Kwendlela Ekhonkolo Kuyaqhubeka eManisa
Ukusetshenziswa kokhonkolo komgwaqo okwaqalwa nguMasipala iManisa Metropolitan kulo mgwaqo ohlinzeka ukuxhumana phakathi kweGölmarmara neTienli kuyaqhubeka. ISekela likaNobhala Jikelele woMasipala iManyisa Metropolitan u-Ali Öztozlu noBurak Aslay, Umgwaqo kaMasipala Wenhlangano [Okuningi ...]
Umugqa wezinombolo we10 wabafundi
UMasipala waseKocaeli Metropolitan, osebenza futhi phakathi 'kwenombolo ye-10 yenombolo yabafundi' waziwa ngokuthi indiza ye-10'un iyaqhubeka ingaphazamiseki. I-59 ngohambo olulodwa lokujikeleza [Okuningi ...]
Halkalı Ishedyuli yesitimela se-Kapıkule kanye namanani amathikithi
Halkalı Ishedyuli yezitimela zeKapıkule namanani amathikithi; I-TCDD Transportation Co ngu Halkalı Kukhona indiza ye-1 yokubuyisa phakathi kweKapıkule.Halkalı Isikhathi esijwayelekile sokuhamba phakathi kweKapıkule yi-4. [Okuningi ...]
Ama-İzmir Blue Sithula Amashejuli namanani wamathikithi: Zonke izinsuku phakathi kwe-İzmir neBaşkent Ankara, okungelinye lamadolobha abaluleke kakhulu ezwe lethu ngobukhazikhazi bemvelo, isiko, imboni kanye netheku. [Okuningi ...]
Namuhla Emlandweni: I-1 Novemba 1924 Mustafa Kemal Pasha enkulumweni yokuvula yoMkhandlu Kazwelonke WaseTurkey
Namuhla emlandweni u-1 Novemba 1899 Arifiye-Adapazarı line (8,5 km) yavulwa. I-1 Novemba 1922 Aydın Line idluliselwe enkampanini yaseBrithani ngokwesicelo sabaphathi benkampani. Abasebenzi baseTurkey bahlala esikhundleni. IPhalamende ngemuva kweMudanya Armistice [Okuningi ...]